Ny fitetezam-bola ataon'ny fitondran-tena dia mandray anjara amin'ny fandaharana CJ (Commissions Junction), Programme ShareASale, ary Clickbank, ary mety ho karamaina raha mividy ny vokatra / serivisy na fampandrenesana ny soso-kevitra aorian'ny fividianana rohy avy amin'ny tranonkala Fitness Rebates. Fanamarihana: Ny programa afrikana Commission Junction & ShareASale dia mampiroborobo ireo vokatra sy serivisy samihafa avy amin'ny orinasa maro samihafa.
Google, amin'ny mpividy fahatelo, dia mampiasa cookies ho an'ny dokambarotra ao amin'ny www.fitnessrebates.com. Ny fampiasan'i Google ny cookie DART dia mamela azy hanolotra dokam-barotra ho an'ireo mpampiasa mifototra amin'ny fitsidihany azy amin'ny www.fitnessrebates.com sy tranonkala hafa ao amin'ny Internet. Ireo mpampiasa dia afaka misafidy ny fampiasana ny cookie DART amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny adiresy momba ny fiainana manokana momba ny tolotra Google sy ny votoatiny ao amin'ny URL manaraka - http://www.google.com/privacy_ads.html